प्रदिपले घुम्न जाउँ भनेपछि रिसाईन् जसिता [भिडियो सहित]
फागुन ०२, २०७४ बिगुल न्यूज- SG
काठमाडौँ, चलचित्र ‘लिलिबिली’ को शीर्ष गीत सार्वजनिक भएको छ । ‘घुम्न जाउँ इन्जिन गाडीमा’ बोल रहेको यस गीतको भिडियोमा चर्चित युवा स्टार प्रदीप खड्का र नव-नायिका जसिता गुरुङको फिचरिङ्ग रहेको छ। भिडियोमा प्रदीपले रिसाएकी जसितालाई फकाइरहेको देख्न सकिन्छ ।
कविराज गहतराजको कोरियोग्राफी रहेको गीतको भिडियोमा एस.डी. योगीको स्वर रहेको छ। यस भिडियोमा स्कटल्याण्डको सौन्दर्य दृश्य देख्न सकिन्छ। साथै यस गीतमा नृत्य गरि आफ्नै युट्युब च्यानलमार्फत अपलोड गर्न सक्ने र युट्युबमा सर्वाधिक भ्युज पाउने भिडियोलाई १ लाख नगद पुरस्कार प्रदान गरिने चलचित्र निर्माण टिमले घोषणा गरेका छन् । चलचित्रमा प्रदीप र जसिताकासहित अनुप विक्रम शाही, प्रियंका कार्की, सविन श्रेष्ठ, मनिष श्रेष्ठ, ध्रुव दत्त लगायतका कलाकारहरुको अभिनय रहनेछ । चैत ३० गतेबाट देशैभर प्रदर्शनमा आउन लागेको यस चलचित्रमा मिलन चाम्सले निर्देशन गरेका छन् ।
प्रकाशित : बुधबार, फागुन ०२, २०७४१४:३५
भद्रगोलबाट निकालिए ‘जिग्री’ र ‘पाडे’, राखियो नयाँ कलाकार!
संसारकै सेक्सी युवती डेमी रोज टपलेस हुँदै देखा परिन् बिकिनीमा ! तस्विरमा देखियो बोल्ड फिगर !
यी अभिनेत्रीको सुन्दरताले कायल भइरहेका छन् फ्यान, फेसबुकमा नियालेर हेरिदै यी तस्बिर
समयसँगै यसरी बदलिए यी स्टार किडहरुका लुक, तस्बिर देख्नु भएमा तपाईलाई पनि लाग्न सक्छ जोडदार झट्का
पहिलोपटक यी सुपरस्टारसंग काम गर्दै कंगना, यस्तो छ निर्माताको माग!
आदित्य नारायण झालाई पछि पर्दै पुनित भए ‘खतरो कि खिलाडी’ का बिजेता!